Ụlọ Roll akpụ Machine, Hydraulic Decoiler, Steel Purlin Machine - Haixing
Chọgharịa ọhụrụ anyị ngwaahịa n'okpuru
Ugboro abụọ ụlọ Ngidi Machine
Trapezoidal ụlọ Roll akpụ Machine
Ụlọ Ridge Cap Roll akpụ Machine
Text banyere anyị ụlọ ọrụ
Arụ ọrụ KEMGBE 1996
Anyị na ngwaahịa na-agụnye n'elu ụlọ mpịakọta akpụ igwe, inwetaghachi na akpacha ajị igwe, decoilers, c & z purlin mpịakọta akpụ igwe, slitting edoghi, Light ígwè keel mpịakọta akpụ igwe na ndị ọzọ metụtara akụrụngwa.
All ngwaahịa ime na mba àgwà ụkpụrụ na na-ekele dị ukwuu maka na dịgasị iche iche nke dị iche iche na ahịa n'ụwa nile, dị ka Asia, Africa, Europe, South America, na Australia na na.
Anyị bụ ndị magburu onwe-emepụta
Anyị ụlọ ọrụ ekesịpde ọkachamara imewe otu, anyị nwere ike chepụta dị iche iche profaịlụ dị ahịa chọrọ.
Nzube anyị bụ iji na-eje ozi ahịa anyị n'ụzọ zuru ezu. Anyị na-enye ime ejere-ekwe ka ndị ahịa ịzụta ngwaahịa enweghị ihe ọ bụla na-echegbu.
Anyị ígwè ọrụ ike na-emepụta dị iche iche na ụdị nke na-ewu ihe ndị dị ka na agba ígwè tile, ìhè ígwè keel purlin na n'ala oche na na.
Amaghị nke igwe na ngwaọrụ na-ahọrọ?
Bịanụ, anyị ga-enye gị ihe ndị kasị ọkachamara ndụmọdụ na kacha mma ọrụ!
Gaa na kọntaktị page
N'EZIOKWU bụ ihe mgbaru ọsọ anyị merie-emeri bụ anyị na-achụso